Amaphrotheni BSN Syntha-6: imanyuwali yomsebenzisi, ukubuyekezwa, Ukwakheka
BSN Syntha-6 - amaprotheni ethandwa kakhulu emakethe ezemidlalo umsoco. Sikhuluma wokulungiselela eziyinkimbinkimbi, okubandakanya eziyisithupha ezahlukene izinhlobo amaprotheni nge ezahlukene isivinini nokwenziwa. Amaphrotheni iyona enemisebenzi kakhulu, etholakala wendawo izitolo ezemidlalo umsoco.
BSN Syntha-6: Ukwakheka
Omunye bakhonze amaprotheni - kuba amagremu amane nane, okuhambelana namahalavu Imininingwane iphakeji ifaka. Iqukethe:
200 kilojoule - 6 g fat.
60 mg ukudla (ewusizo) cholesterol.
13 g ama-carbohydrate.
5 amagremu fibre.
2 g ushukela.
23 g amaprotheni.
Ngakho, umuntu ncishana kudliwa inkukhu amaqanda amane noma engamakhulu amagremu inkukhu webele. Kulokhu eziphilayo okufakiwe ukubaluleka ephakeme kunaleyo oshiwo ngenhla imikhiqizo yemvelo.
Umuthi Syntha-6 ngu BSN, intengo zazo zokhahlamba kusuka ruble 4500-5400. 2,27 kg ucezu ngalunye, kuyinto amaprotheni multi-ingxenye, equkethe zonke izakhi ezidingekayo zomzimba. Phakathi reception yakhe kufanele wanezela ngaphandle uma okunamafutha acid Omega-3.
Whey Amaphrotheni ukugxilisa ingqondo.
Whey Amaphrotheni ukuhlukanisa.
Tinhlobo ezahlukene amaprotheni kungaba ngcono digestibility futhi azilethi imiphumela efiselekayo kulabo kungukuthi ababeyizazi amaprotheni izinhlobo noma engazimisele ukuchitha isikhathi on ukukhethwa imikhiqizo.
Njengoba kushiwo ngenhla, amaprotheni BSN Syntha-6 - ethandwa kakhulu futhi ngempumelelo emakethe ezemidlalo umsoco. Thanda amaprotheni udumo lithole ngenxa ukuhlukahluka izinhlobo amaprotheni. Lona inzuzo yayo esemqoka.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba ayeke okukhethayo kuso, ngoba:
Umuthi ungakwazi ukuvimbela catabolism kungakapheli amahora 6 emva kokudla ingxenye amaprotheni.
Syntha-6 - a okukhulu "amaprotheni ebusuku." Umsubathi akanayo ukuchitha imali kwi embizeni ehlukile amaprotheni ebusuku oqukethe casein.
Njengoba BSN Syntha-6 - kuyinto amaprotheni isebenziseka ngezindlela eziningi, asikho isidingo ukuthenga eyengeziwe Iqanda umkhiqizo, okuyinto angena igazi isikhathi eside - ihora ngemva ukusetshenziswa.
Abakhiqizi ukungezwa amaprotheni ama-enzyme, okukuvumela balahle emizweni ezingemnandi esiswini emva phanga phi dla.
Syntha-6 - kuyasiza hhayi kuphela kodwa futhi okumnandi. Umenzi inikeza okuthandwa ezimbalwa ezimnandi ezokwenza ukwengeza ukwehluka kohlelo nsuku zonke. Uphenyo abasubathi ukhuluma ngalokho ncamashi lokhu izidakamizwa luphakeme ukunambitha efana futhi wasebenzisa enkulu.
Ngaphezu kwalokho, lokhu izidakamizwa kungaba isindise nokuphila kubagijimi abanenkinga ne ukugaya amaprotheni. Ukwephula umsebenzi enzymatic aqede ukuncela izakhi. Nokho, njengoba abakhiqizi waqikelela ukuthi Syntha-6 aqukethe ama-enzyme kusuka amaprotheni Izithako uzobe egxile ngokuphelele, ngaphandle kokuba nemiphumela engemihle ezinjengesicanucanu futhi yisisu.
Kukhona omunye ukuguqulwa amaprotheni - a BSN Syntha-6 ukuhlukanisa. izinga zayo ezivelele - ukungabikho pheze ephelele amafutha kanye carbohydrate, kanye ingxenye anda amaprotheni umthamo ngamunye.
Ubani odinga amaprotheni ukuhlukanisa Syntha-6
Amaphrotheni - isakhi kudingekile kwemisipha ukukhula. Ungabathola isisindo futhi ngaphandle amaprotheni ngokwanele, kodwa zifana amafutha kuka kwemisipha.
Kulesi sisekelo, Syntha-6 kuyadingeka:
Abantu abangenawo isikhathi iprotheni ukudla okugcwele. Kumele esekelwe imithetho emibili amagremu amathathu amaprotheni izinga amakhilogramu esisindo ngayinye. Uma Ukudla akuyona isilwane amaprotheni eyanele yokwakha yemisipha ngeke zisebenze ngaphandle amaprotheni Izithako.
Zonke labo abagulayo inkukhu webele noma amaqanda kweshumi kudliwa ngosuku. Jwayelekile ukudla amaprotheni ekugcineni ngizithola bese uqala ukuba abangele reflex Gag. Amaphrotheni okumnandi nge BSN ngeke basisize esikhundleni ngokuphelele futhi tshala amaprotheni yokudla.
Labo badunyazwa umthethosisekelo umzimba. Amafutha amaningi - kungcono kilojoule extra namaprotheni akwanele ekudleni. Ukuthatha iprotheni eziyinkimbinkimbi, kanyekanye ekuqedeni imenyu carbohydrate eziyingozi kanye amafutha, futhi ungagcina yemisipha yakho futhi ukuqeda fat ngokweqile.
Ectomorph (abantu mncane) abafuna ukwakha kwemisipha.
Abasubathi ukuba "iphele". BSN Syntha-6 ukuhlukanisa kuvimbela catabolism, ukuze emva kwesisindo abakwazi ukugcina okuningi yemisipha.
Abantu abadinga ezihlukahlukene ezengeziwe zokudla noma umane ufisa ukuzama into entsha.
Akubalulekile lokunikeza Syntha-6 sibonisa "iphilisi eliwumlingo" lokuphila, ikuvumela ukuba kweso iphenduke block 120-ganda kwemisipha. Lena amaprotheni qualitatively kuhlukile "nabo" yabo. Kwake kwathi ngo-ipheshana wokugaya ukudla, amaprotheni amahora ayisithupha ahlukaniselwe amino acid. Lapho ama-amino acid emzimbeni uhamba, kulapho kuzothatha ukwakha kwemisipha. Lena isenzo eyinhloko amaprotheni.
Ngaphezu kwalokho, njengoba Syntha-6 kuyinto amaprotheni eziyinkimbinkimbi, amino acid ugxile ngokulinganayo. Uhlobo ngalunye amaprotheni has siqu Mastering isikhathi yayo, ukuze amaprotheni kusukela BSN ngeke laliqapha anabolism ngesikhathi ngamahora ayisithupha.
BSN Syntha-6: indlela yokwenza
Kunconywa ukusebenzisa wamaprotheni kubantu 1-2 servings nsuku zonke, zangenza ubisi, noma isiphuzo sezithelo. Endabeni kakhulu - emanzini abavamile. Kungcono ukusebenzisa ingxenye umthamo zonke izinsuku we amaprotheni ngaphambi embhedeni - ngeke balahle catabolism ebusuku.
Syntha-6 Kubalulekile ukuthatha sehora ngaphambi Amazing ukuthola amaprotheni esheshayo, futhi ukusekela umzimba wakho ngesikhathi uzivocavoca.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izingxenye umbhangqwana - kuba iseluleko ejwayelekile okungahambisani acabangele izici ngamunye. Ngokwesibonelo, uma usuku sitholwa engaphezu kwemibili amagremu amathathu amaprotheni amakhilogramu esisindo ngayinye, thina Ingakhawulela ingxenye eyodwa amaprotheni. Nokho, uma kuphela usuku lonke kasisekho ehhovisi noma esikoleni polnoi ngaphandle kokuthola ephelele ukudla amaprotheni, lingaba ngaphezu umthamo kuboniswe.
Emini, ungasebenzisa kuze kube servings eziyisithupha BSN Syntha-6. Kodwa-ke akudingekile ukuba ususe zonke Ukudla ezemidlalo umsoco. Okwedlulele umthamo watusa - lokhu awufani ngazo kufanele kuphindwe njalo.
I amaprotheni uqobo ayinayo imiphumela eseceleni. Nokho, kungase kube nezinkinga pheshana emathunjini esimweni kokudla ezinkulu. Ukucanuzela kwenhliziyo, ukuvuvukala, uhudo - miphumela engemihle evela Syntha-6 umsubathi elinde esimweni kokweqa ngemithamo ezinconyiwe 5-10 izikhathi.
Umuthi Ungashintshanisa ngokuphelele ukudla amaprotheni, ezimweni ezehlukile, kodwa oqothulayo amagremu angaphezu kwamathathu amakhilogramu esisindo ngayinye uzoguqula ke kusukela ibhekwa ezemidlalo inkinga.
Izimo kokuthola, kwasekuqaleni, kukhona izinso izinkinga. Kulokhu, ukusetshenziswa okungaphezu kokukodwa nengxenye amagremu amathathu amaprotheni kilogram of bodyweight ngalinye is contraindicated.
Libuye efiselekayo ukuthatha leli amaprotheni uma hypersensitive Syntha-6, okuyinto evamile.
Kwenqatshelwe ngokuthatha izidakamizwa kwabesifazane abakhulelwe, nabancelisayo futhi abantu abangaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala.
Indlela ukwenza lunges nge dumbbells
Bulging biceps futhi wonke umuntu angakwazi
Indlela ngokushesha ekhiphela up biceps ekhaya
Ubuhlungu unyawo phakathi isithende futhi uzwane: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Ubani owasungula le curling? Izikhathi ayisihluthulelo umdlalo
Kanjani ukulungisa kokukhubazeka umntwana?
Bhisikidi isitashi: zokupheka okuzenzela
I edume jumper okusezingeni eliphezulu Javier Sotomayor. Biography, waqopha umlando, izithombe